တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: ပြည်တွင်းတွင် WiMax အင်တာနက် ကို တပ်ဆင်ခ ကနဦးပေးသွင်းငွေပေးရန်မလိုဘဲ တပ်ဆင်နိုင်မည်
ပြည်တွင်းတွင် WiMax အင်တာနက် ကို တပ်ဆင်ခ ကနဦးပေးသွင်းငွေပေးရန်မလိုဘဲ တပ်ဆင်နိုင်မည်
ပြည်တွင်းတွင် WiMax အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှုပေးသည့် Red Link Communications Company Ltd. မှ အင်တာနက် တပ်ဆင်ခ ကနဦးပေးသွင်းငွေပေးရန်မလိုဘဲ တပ်ဆင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ဟု ယင်း ကုမ္ပဏီမှ သိရသည်။
ယင်းသို့ရောင်းချရာတွင် ကနဦးတပ် ဆင်ခအခမဲ့ဖြစ်ပြီး တပ်ဆင်ရမည့်ပစ္စည်းများကို လျှော့ဈေးဖြင့် ရောင်းချမည်ဖြစ်ကာ သုံးစွဲမည့် အင်တာနက်လိုင်း Plan အလိုက် ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်များရှိမည်ဖြစ်သည်။
ပရိုမိုးရှင်းကာလအဖြစ် သြဂုတ် ၂ ရက် မှ ၈ ရက်အထိ Red Link ၏ Sales Office များဖြစ်သော Pearl Condo, BAK IT Mall, Junction Square၊ ချော်တွင်းကုန်းအရောင်းဆိုင်၊ Junction Mawtin အရောင်းဆိုင်နှင့် ဈေးကွက်အတွင်းရှိ Red Link အရောင်း ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများထံတွင် ၀ယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယခင် ကျပ် ၄၅၀၀၀၀ နဲ့ရောင်းချရာ မည်သည့် Plan ဖြင့် ၀ယ်ယူသည်ဖြစ်စေ ယင်းဈေးနှုန်းတွင် ကနဦး တပ်ဆင်ခ၊ CPE (Router) တန်ဖိုးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးများ ပါဝင်သည်။ ယခုလျှော့ချပေးသောဈေးနှုန်းများတွင် ကနဦးတပ်ဆင်ခလျှော့ချပေးပြီး Gold Plus Plan အသုံးပြုလိုသူများအတွက် Router တန်ဖိုး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချပေးပြီး နှစ်စဉ်ကြေးအပါအ၀င် ကျပ်၂၃၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။ Prepaid Plan အသုံးပြုသူများအတွက် Router တန်ဖိုး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချပေးပြီး နှစ်စဉ်ကြေးအပါအ၀င် ကျပ် ၃၀၀၀၀၀ နှင့် အခြား Plan အသုံးပြုသူများမှာ ကျပ် ၄၀၅၀၀၀ ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။
ယင်းအပြင် Prepaid Plan အသုံးပြုသူများအတွက်3GB ငွေဖြည့်ကတ် ၁၀ ကတ် ၀ယ်ယူပါက 1 GB ငွေဖြည့်ကတ် ၁၀ ကတ် ထပ်ဆောင်းပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by အောင်မျိုး at 7:11 PM
ဂျီလတ်(G Latt) Collection
လင်းလင်း(Linn Linn ) Collection
L ဆိုင်းဇီ( L Sai Zi ) COllection
မိုးမိုး(Moe Moe ) Collection
ဖုန်းလာရင် ဘေးနားကလူတွေက ကောင်းကင်ပေါ်ကိုမော့ကြည့်မ...
" မြင်းဟီသံ...." ringtone လေးပါ.....
ဒီ ringtone လေး ကြိုက်ကြလား...
ဥသြငှက် Ringtones များ
Mobile Directory v1.0.Android
Brightness Guide 1.1 Full Version
I Beat, D SKy , Ice Cold – ကျောင်းစာအုပ် [ CD ]
iPhone 3G Untethered Jailbreak And Sim Unlock
Firefox 24.0 Beta6( နောက်ဆုံးထွက် )
SIM Card ရဲ့PIN / PUK Lock အကြောင်းနဲ့ Lock ကျရင်ေ...
iPhone/ Android ဖုန်းတွေအတွက် Plants VS Zombies Ga...
Mobile Guide Issue Vol-2 ၊ Issue-117 (26.8.13)
Digital Life Journal Issue Vol-2 ၊ Issue 16 (26.8....
အင်တာနက် ဂျာနယ် အတွဲ (၁၄) အမှတ် (၃၃) (26.8.13)
Advanced SystemCare Pro 6.4.0.289 Full ..
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Dorpbox App
Application manager porversion III (App2SD card ...
Android နဲ့ Youtube ကဒေါင်းရာမှာ အကောင်းဆုံး TubeM...
Samsung Galaxy S4 Mini I9195 ကို Root လုပ်နည်း & F...
Windows7တင်ပြီးတာနှင့်လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များ ( ...
Java ဖုန်းများအတွက် Java game 77 မျိုးပါ
HTC ဖုန်းများအတွက် CWM များစုစည်းမှု
HTC ဖုန်းများအတွက် All In One Toolkit တွေ စုစည်းမှု...
ဖိုးကာ – အိပ်မက် ၁ ၊ အိပ်မယ် ၂ [ CD ]
Maung Min_Online Mixtape [Mixtape]
New Zawgyi One Flip Font For Android-V.1.0 (Samsun...
Window Registry အကြောင်း (မြန်မာလို)
SAMSUNG GALAXY TAB 10.1 GT N8000 ကို ROOT လုပ်နည်း...
MoboGenie v2.19 (Android ဖုန်းတွေအတွက် English ver...
Samsung ဖုန်းတွေကို Unlock လုပ်မဲ့ SRS Samsung Rem...
ကြိုးဖြတ်ပြီး အစာကျွေးရမဲ့ Game (Cut the Rope HD ...
Root လုပ်ထားတဲ့ android user တွေအတွက် Root Explore...
Android အတွက် နောက်ဆုံးထွက် Bagan Keyboard Pro v1....
BIOS မှာ pw တွေ ခံထားတာကိုကျော်မယ်
Firefox browser အသစ်ထုတ်နောက်ဆုံး version (v 24.0)...
Android Version 4.1.x အထက်တွေမှာ မြန်မာစာရေးရာတွင်...
ESET NOD32 Update Offline 8701 20130818
Mobile Beauty App နဲ့အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်းကို Andr...
ဖုန်းခလုတ်တွေမနာအောင် Screenshot ER PRO 2.3.3.3 နဲ...
Service သမားတို့လက်စွဲ Hiren’s BootCD 15.2
Excel 2013 ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနည်း စာအုပ်ြ...
Internet အသုံးပြုသူများအတွက် Internet Security စာအ...
သိမှတ်ဖွယ်ရာ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ စာအုပ်
2.74MB သာရှိတဲ့ Window7ISO (19 August 2013 Updat...
Mobile Guide Issue 116 (18.08.2013)
Digital Life ဂျာနယ် အတွဲ ၂ အမှတ် ၁၅(18.08.2013)
Windows 8 Pro (x86/x64) Free Download (New Upload ...
VeryPDF PDF2Word 3.0 Full Version (3MB )
Android Phone ထဲက Data တွေကို အင်တာနက်ကနေ လှမ်းဆွဲ...
Android နဲ့ လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ တွက်ကြမယ်...
Photoshop သမားများ အတွက် အသင့်သုံးဘွဲ့ဝတ်စုံများ
Firmware တွေ သီးသန့်တင်ထားတဲ့ဘလော့.. MP Firmware
Myanmar To English Dictionary
iTunes Data Recovery v5.0.0.1 + keygen
Google Play Store က Apk တွေကို ကွန်ပျူတာ မှ ဒေါင်း...
Samsung wave2 GT-S8530 bada 2.0 firmware
ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်ကို ဖုန်းနဲ့ရွယ်လိုက်ရုံနဲ့ ငွေဖြည...
သတင်းကြီးနေတဲ့ iPhone မကြာခင်အဆုံးသတ်ဖွယ်ရှိ
Android OS ဖုန်းတွေမှာ ပါဝင်လာတဲ့ Dropbox စနစ်ကို ...
SIM Balance [APP]
Network တွေကို ချိန်ညှိပေးမဲ့ Network Fixer (V 1)
Myanmar Fonts အလှများ စုစည်းမှု
Drivers for notebook ASUS K55VD
How To Unlock Mobile Phone - Mobile Unlocker
Mobile Guide Issue Vol-2 ၊ Issue-115 (12.8.13)
Welcome Back – လင်းပင်ဟိန်း [ CD ]
Acer Iconia B1-A71 ကို root ကြမယ်
အချိန်ကုန်သက်သာစေဖို့ IDEVICES တွေကိုiMobie AnyTra...